"Isicwangciso seminyaka emihlanu se-14" siqala, uFuzhou ukhawulezisa ulwakhiwo "lweedolophu" - China Foshan Hermes Steel
"Isicwangciso seminyaka emihlanu se-14" siqala, uFuzhou ukhawulezisa ulwakhiwo lwe "sixeko"
Kwiveki ephelileyo, iiprojekthi ezingama-21 eLuoyuan Bay Port Area ye "Silk Road Seaport City" eFuzhou zatyikitywa, kutyalo-mali olupheleleyo lwe-35.4 billion yuan (RMB, efanayo apha ngezantsi). Phakathi kwabo, isiphelo esiphakamileyo seprojekthi yentsimbi yezinto ezitsha ezityaliweyo kwaye zakhiwa yiChina Baowu Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd., ngotyalo-mali olupheleleyo lwe-yuan ye-10 yezigidigidi, iya kwakha i-3.22 yezigidi zeetoni zeemveliso ze-boutique kwi ILuoyuan Bay kwisiseko seBaosteel Desheng esele sikhona. Izinto steel stainless.
Amagosa asekuhlaleni axelele i-China News Agency intatheli ngomhla we-8 ukuba le khontrakthi isendaweni enye izakukhawulezisa ukuphuculwa kweshishini laseLuoyuan Bay kwaye kukhawulezise ukukhuthazwa kwe "Silk Road Seaport City" yokwakha indawo ekumgangatho ophakamileyo eluhlaza.
Ukunyuka okuthe chu kweSilk Road Seaport City eFuzhou yinto encinci yokwakha okukhawulezileyo kweFuzhou "isixeko". Emva kokungena "kwi-GDP edlula iklabhu enye ye-yuan" okokuqala ngqa, uFuzhou uqhubekile nokukhulisa amandla, esenza yonke imizamo yokuthinta "ipali yokukhula", akhe indawo ye "Haisi", kwaye azame ukuba sisixeko esiphakathi sesizwe.
IsiCwangciso se-14 seminyaka emihlanu sasiqalisiwe. UFuzhou wayibeka yacaca into yokuba kule minyaka mihlanu izayo, izakugxila kulwakhiwo “lwezixeko” ezintandathu ezinje ngeFuzhou Binhai New City, Fuzhou University City, Southeast Auto City, Silk Road Seaport City, Fuzhou (Changle) International Aviation City , kunye neSixeko saManje sokuLungiselela. Kwavakaliswa "umnxeba wendibano" ukukhawulezisa ulwakhiwo lwesixeko sanamhlanje.
Ngokwesi sicwangciso, "iithagethi ezinzima" zophuhliso lukaFuzhou ngexesha "lesiCwangciso seMinyaka emiHlanu ye-14" zezi: ukufezekisa ukwanda okutsha kwinqanaba lamandla kwikomkhulu lephondo, ukuzama ukugcina umyinge wokukhula komyinge we-7% kwi-GDP, Indawo eyakhiweyo emalunga neekhilomitha ezingama-500 zesikwere, kunye nabemi abasisigxina basezidolophini abangama-500 amawaka alishumi, ubukhulu bekomkhulu lephondo kunye namandla okuqhuba kwimitha bonyuke kakhulu.
U-Huang Maoxing, umphathi weSikolo sezoQoqosho kwiFujian Normal University, ukholelwa ekubeni ukwakhiwa kwezixeko ezithandathu zale mihla kuya kunika amandla okomeleza ukukhula kweFuzhou okuphakathi kunye nesantya esiphezulu.
Ekuqaleni konyaka omtsha, ukwakhiwa kwezixeko ezithandathu zala maxesha eFuzhou kugxothiwe ngokupheleleyo. Kwi-Southeast Auto City ebekwe eMinhou County, kwisiXeko iFuzhou, i-203 yeProjekthi yokwandisa uLwakhiwo kunye neProjekthi yokwakha ngokutsha, iprojekthi yeLanpu Industrial Park, kunye neprojekthi yeDongtai High-isiphelo seNew Material Industrial Park iyakhawulezisa. U-Ye Renyou, unobhala we-Minhou County Party Committee, uchaze ukuba ukuqokelela iqela leeprojekthi ezinkulu nezilungileyo zokuxhasa iimoto ziya kumilisela ikhonkco elomeleleyo lokuncedisa kushishino lweemoto, ukwandisa ngakumbi nokuqinisa ishishini lezithuthi, kwaye wenze yonke imizamo yokwakha mpuma isixeko imoto kunye nophuhliso olumanyanisiweyo abantu, ishishini kunye nesixeko.
KwiBihai New City yaseFuzhou, iprojekthi yeFujian Berry Hekang Digital Life Industrial Park (iSigaba II) iqalile kutshanje, ngotyalo-mali olupheleleyo lwe-1.678 yezigidigidi ze-yuan, egxile kwikhompyuter yelifu, ukulandelelana kofuzo, ukuhlela imfuza, ubukrelekrele bokuzenzela kunye nobunye ubuchwephesha obuphezulu ukwakha iziko ledatha kunye nesiseko semveliso, iziko le-R & D, kunye nezinye izinto ezisebenzayo, impilo-yomjikelezo wobomi obupheleleyo kunye neepaki zorhwebo zonyango. Le yenye yeqela lokuqala leeprojekthi eziphambili kwiPhondo laseFujian ukuqala ukwakhiwa okugxininisiweyo ekuqaleni kwexesha le-14 leSicwangciso seMinyaka emihlanu.
Ukukhawulezisa ukwakhiwa "kwesixeko", kwaye iFuzhou iya kugxininisa inkxaso yezemizi-mveliso. Kudliwanondlebe, uSodolophu waseFuzhou Wena u-Mengjun uthe ishishini yeyona nkxaso ibaluleke kakhulu ekukhuthazeni uphuhliso olukumgangatho ophezulu kuyo yonke indlela ejikelezayo, kwaye amandla okuqala angamandla okuqhuba.
Xa sijonga emva "kwisiCwangciso seShumi elinantathu seminyaka emihlanu", ngenxa yokukhula okuthe kratya kweziqwenga zorhwebo ezinjenge-textile, ifayibha yemichiza kunye nokutya kwishishini elikhanyayo, ixabiso lemveliso lilonke laseFuzhou kulindeleke ukuba lidlule kwi-1.1 yezigidi zeerandi . Ukuya "kwisiCwangciso se-14 seminyaka emihlanu", iFuzhou iya kuqhubeka nokubambelela kwi "niubi" yeshishini kwaye ingaphumli, incede ekutsaleni iinkokheli ezinkulu, ikhulise amaqela amakhulu, kwaye iphuhlise amashishini amakhulu.
Izibonelelo zamaTshayina aphesheya kolwandle kunye neTaiwan nazo ziluncedo olukhulu eFuzhou ukukhawulezisa ulwakhiwo lwe "sixeko". IFuzhou yidolophu eyaziwayo yasetshayina phesheya kwaye likhaya elibalulekileyo labemi baseTaiwan. Kukho abantu abangaphezu kwezigidi ezi-4 phesheya kolwandle kumazwe angama-177 nakwimimandla ehlabathini. U-Huang Maoxing ukholelwa ekubeni ukuqokelela ngokubanzi ubulumko kunye namandla abantu bakuthi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba bazabalazele ukufumana imali eninzi, iitalente kunye netekhnoloji ekhaya nakumazwe aphesheya ukuqokelela eFuzhou kuya kukhawulezisa ulwakhiwo lwezixeko ezithandathu zale mihla kubandakanya iFuzhou Binhai New City, Southeast Auto City , kunye neSilk Road Seaport City. Khuthaza "umjikelo ombini" kwaye usebenze ipateni entsha yophuhliso. (Gqiba)
Ixesha lokuposa: Mar-19-2021